Dagaal qasaare geystey oo ciidamo ka tirsan dowladda ku dhex maray magaalada Muqdisho | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Dagaal qasaare geystey oo ciidamo ka tirsan dowladda ku dhex maray magaalada Muqdisho
Dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ku dhex maray Ciidamo ka tirsan dowladda xero ku taal degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho iyadoo dagaalkaas uu sababay dhimasho iyo dhaawac.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan toban ruux ay ku dhinteen iska horimaadkan iyadoo dadka dhintey ay isugu jiraan dad rayid ah iyo ciidamada dagaalka dhex maray.
Dagaalkan ayaa la sheegay in uu ka qarxay muran ka dhashay qeybinta kaarar ay raashin ku qaadan lahaayeen dad barakacayaal ah oo ku jirey jaamacadii hore ee Gahayr ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale iska horimaadkan ayaa sababay dhaawac soo gaaray ciidamadii dagaalamay waxaana wararka ay sheegayaan in dhaawacan la dhigey isbitaalada magaalada Muqdisho.
Ma jiro illaa hadda wax war ah oo ka soo baxay ciidamada milatariga iyadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee ay ciidamada dowlada ku dagaalamaan magaalada Muqdisho ama deegaano kale oo ka mid ah dalka Soomalaiya.